နေအိမ် » မိန်းကလေးဂိမ်း » Ariel's Overalls Dress Up
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Ariel's Overalls Dress Up
ထိန်းချုပ်ရေး: Tap on screen on mobile phone and mouse click on PC. Ariel's Overalls Dress Up
ကစား: 27,067 tag ကို: HTML5 ဂိမ်း, HTML5, Ariel, Ariel games, Ariel princess, Ariel dress up, ဂိမ်းဖွင့်ဝတ်စားဆင်ယင်, dressup games
အဲလ်ဆာနဲ့ Jack Frost ကနှင့်အတူနှစ်ဦးကြောင်အဆိုးမြင်အန္တရာယ်နှင့်ခြေးပိုးထိုးစုံတွဲများမိမိတို့အဝတ်ကိုရှေးခယျြရာတှငျကူညီခြင်းနှင့်လည်းသူတို့သစ်နှစ်အတွက်အသီးအသီးအသုံးအလိုတော်ဂုဏ်အသရေဆက်စပ်ပစ္စည်းလိုအပ်ပါတယ်။
ဟီလာရီကလင်တန်မိန်းကလေးဂိမ်း vs Donald Trump
Donald Trump နှင့်ဟီလာရီကလင်တန်ရွေးကောက်ပွဲကိုရှေ့တော်၌ပုံမှန်မဟုတ်သောပြဿနာနှင့်မေးခွန်းများရှိသည်ဖို့အိုဘားမားရဲ့အလှပြင်ဆိုင်မှလာ! သူတို့ကသူတို့ရဲ့စိတျထဲမှာအရူးဆံပင်ပုံစံတွေရှိသည်။ သငျသညျအိုဘားမားသူတို့ကိုကူညီနိုင်မလား? သူငယ်ချင်းကြိုက်နှစ်သက်သောအဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာသင်သည်လည်းသူတို့အားတက်ဝတ်စားဆင်ယင်နိုငျသညျ!
Tom အိပ်မက်မင်္ဂလာဆောင် Angela နှင့်ပြောနေတာ
အဆိုပါပြောနေတာတွမ်ကြောင်တွမ်နှင့် Angela လက်ထပ်ရန်လိမ့်မည်နှင့်သင်မိတ်ကပ်ကိုရှေးခယျြခွငျးအားဖွငျ့အကူအညီ, စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့် kitty Angela အပေါင်းတို့သည်ဂုဏ်အသရေဆက်စပ်ပစ္စည်းလိုအပ်ပါတယ်။
ဟယ်လို Dolly တက်ဝတ်စားဆင်ယင်ချိုးငှက်
ရဲ့အလှဆုံးခရစ္စမတ်အဆင်တန်ဆာတွေနဲ့ခရစ္စမတ်သစ်ပင်ကို decorating ခရစ္စမတ်စိတ်ဓါတ်များဝင်ရောက်ဖို့အဆွေခင်ပွန်းသုံးယောက်ကူညီကွပါစို့။ သစ်ပင် decorating အပြင်အဆွေ၏အသီးအသီးအဘို့အကြည့်ကိုရွေးချယ်ပါ။
အ powerpuff မိန်းကလေး unordinary အပတ်က
စူပါအစွမ်းထက်မိန်းကလေးများမြို့ Ville မြို့စိုးမိုးလိုသူလူဆိုးတစ်အရေအတွက်ရင်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ သင်အကြိုက်ဆုံးသူရဲကောင်းကိုရွေးချယ်ပါပျက်စီးခြင်းနှင့်အထဲကမြို့ save ဖို့ရန်သူတို့ကိုစစ်တိုက်စစ်မှုကိုစတင်။
မင်းသမီးအန်နာဟာကြီးမားတဲ့ toothache ရှိပြီးသင်သူမရဲ့အံသွားပေါ်သမျှသောယိုယွင်းဖယ်ရှားပစ်မည်သည့်နေရာတွင်တစ်ဦးပါးစပ်တွင်းကုသမှုလုပ်ဆောင်မှသွားဆရာဝန်မှသူမ၏ယူဖို့လိုပါတယ်။ မှန်ကန်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုလိုက်နာပါနှင့်တစ်ဦးလှပကျန်းမာသန်နှင့်အတူမင်းသမီးချန်ထား
စာအုပ် coloring minions
အ minions ၏အဖြစ်လည်းစာအုပ်အရောင်၏လိုအပ်ချက်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ လှပသော drawing အသီးအသီး minions ထွက်ခွာခြင်းအားဖြင့်ဒီဇိုင်းများ coloring စတင်ရန်သင်၏စာအုပ်နှင့်အနည်းငယ်သုတ်ဆေးဖမ်းပြီး။
Flynn နှင့်အတူတက်ကွဲ rapunzel အချိန် add
Rapunzel Split ကို Up ကိုအတူ Flynn ကသငျသညျအခမဲ့ Timefor Add Flynn ကအတူ Rapunzel Split ကို Up ကိုဆော့ကစားနိုင်မအွန်လိုင်းမှဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်တို့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်, Rapunzel Flynn ကအတူတက်ခွဲဖို့လိုလားပေမယ့်ရလဒ်ဖြစ်လတံ့သောအရာကို။ သင်ဤ har စဉ်အတွင်းသူမ၏စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေသူမ၏ကူညီပေးနိုင်ပါသည်
မင်းသမီးအဲလ်ဆာသူမ၏အစာအိမ်အတွက်ကြောက်မက်ဘွယ်သောနာကျင်မှုရှိတယ်။ သူမ၏အစာအိမ်အတွင်း၌သောဘက်တီးရီးယားဖယ်ရှားပစ်ရန်အပေါငျးတို့လုပျထုံးလုပျနညျးဖျော်ဖြေခြင်းအားဖြင့်မင်းသမီးကိုကူညီပါ။ တစ်ချိန်ကနှင့်အဲလ်ဆာရဲ့အစာအိမ်ကိုက်ခဲနှင့်အတူအလုံးစုံတို့အဘို့ကိုအဆုံးသတ်ခွင့်နိုင်ရန်အတွက်ခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာပါ။
ဟယ်လိုအထူးမင်္ဂလာဆောင်ကိတ်မုန့်ကိုသင်အခမဲ့ 4J.Com ပေါ်မှာကစားနိုင်သည့်အွန်လိုင်းဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟယ်လိုဝင်းလာမယ့်နေပါသည်! သငျသညျလီလီအထူးဟယ်လိုဝင်းမင်္ဂလာဆောင်ကိတ်မုန့်ကိုအလှဆင်ကူညီနိုင်မလား? အဆိုပါကိတ်မုန့်သင့်အဘို့ပြင်ဆင်ဖြစ်ပါသည်, ကောင်းတစ်ဦးအချိန်ပါ
တွမ်ကြောင်2Talking
တွမ်ကသင်၏ထိတွေ့တုံ့ပြန်မှုနှင့်သင်တစ်ဦးရယ်စရာအသံနှင့်ဆိုသအရာအားလုံးကို repeat ကြောင်းကိုသင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ, သူ့ကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သူ့ကိုပြီးမှသို့မဟုတ်သူ၏အမြီးသည်ဖမ်းပြီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်ပျော်စရာပဲ!
တစ်ခုခုဒီအချိန်ပြန် Doraemon ကူညီ .. .. Doraemon မှဖြစ်ပျက်နှင့် Nobita အကြှနျုပျ၏ကသူ့အခန်းထဲမှာသော့ခတ်ခဲ့သည်! သူ၏အဆွေခင်ပွန်းကိုရှာပါနှင့် Doraemon fix!
တွမ်ကြောင်4Talking
ဒီ Talking Tom Cat4ခုနှစ်, မေတ္တာနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်း၏သီချင်းဆို Tom နှင့်သူ့ရည်းစားရဲ့အိန်ဂျယ်မင်းသမီးအကြားဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်ပါတယ်။ တွမ်ကစားလိမ့်မည်မည်မျှလှည့်ကွက်အံ့သြ?
ဒိုရာအတွက်လယ်ယာကယ်တင်တော်မူ၏, သငျသညျ, အပေါငျးတို့သတိရစ္ဆာန်များ၏စောင့်ရှောက်မှုယူကြက်ဥကိုစုဆောင်း, သင်၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးသည်သူ၏အားလုံးအိမ်မှုဝေယျာပြီးအောင်ကူညီပေးဖို့လိုပါတယ်။ သငျသညျကြက်သား Coop, ဝက်ကလောင်ဒါမှမဟုတ်ကျီအတွက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်
SpongeBob ပေ VET ဆရာဝန်
ဒိုရာကိုစူးစမ်းရှာဖွေသူယခုသူမ၏ချစ်စရာနည်းနည်းအစ်ကိုနှင့်အစ်မတစ်ဦးကလေးထိန်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်အရမ်းသူတို့ကိုချစ်သောသူနှင့်သူမ၏မိဘများကသူ့ကိုသူတို့နှင့်အတူနေထိုင်ရန်နှင့်သူတို့ကိုဂရုစိုက်ဖို့ခွင့်ပြုသည့်အခါသူမအလွန်မင်္ဂလာရှိ၏။ ယနေ့တွင်ထိုနေ့ရက်သည်နှင့်သူမ၏ဆည်းပူးနေကိုကူညီသင်ချင်ပါတယ်
Winx Club ကဂိမ်း: ငါ့အ Fairy ပေ
သင့်ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင်တဲ့ Fairy ပေများအတွက်ဂရု!
Doraemon ထိုအ Nobita ကလဲ့စား
Doraemon ထိုအ Nobita ကလဲ့စား။ ကိုင်တွယ်ရန် mouse ကိုသုံးပါ။ သူဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်သူ၏ပြန်လာသောအခါအတန်းထဲတွင် Nobita လက်စားချေ Jyian နှင့် Suneo ကိုကူညီပေးပါ။ သင်ကဆရာအာရုံစိုက်ဖို့ရှိသည်!
အနှင်းမင်းသမီးကယ်တင်ရန်နှင့်နှင်းဖုံးသစ်တောကိုကယ်တင်မယ့်ခရီးကိုအပေါ်ဒိုရာနှင့်သူမ၏မိတ်ဆွေများ Join ။ ဒိုရာကရေခဲနေသောသမုဒ္ဒရာအတိတ်, အနှင်းတောင်တန်းများမှတဆင့်ခြင်း, ဂူအတွင်းပိုင်းကို၎င်း, မင်းသမီးကိုကယ်တင်ရဲတိုက်ရကူညီပါ!